माल्दिभ्समा &#039;इन्डिया आउट&#039;को नारा चर्किदै - Janabato
माल्दिभ्समा 'इन्डिया आउट'को नारा चर्किदै
२०७८ पुस ८ गते बिहिबार ०७:५३ मा प्रकाशित
१ महिना, ५ दिन, २ घन्टा अगाडि
बुटवल, ८ पुस । विदेश नीतिमा द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि दुई देशका सरकारका साथै विपक्षले पनि अर्थ राख्छ। भारत र माल्दिभ्सका सरकारबीच अहिले राम्रै सम्बन्ध रहे पनि माल्दिभ्सका विपक्षीहरू भारतविरुद्ध मुखरित भइरहेका छन्।
त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीनले अहिले भारतविरुद्ध जारी प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। डिसेम्बर १९ मा माल्दिभ्सको विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य जारी गर्दै भारतविरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनलाई लिएर चिन्तित भएको जनाएको थियो।
टापुहरूको देश माल्दिभ्समा विपक्षी समर्थित ‘इन्डिया आउट’ अर्थात् ‘भारत निस्की’ भन्ने अभियानले अहिले तीव्रता पाइरहेको छ। माल्दिभ्सका सांसद अहमद शियामले उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादवको पत्रकार सम्मेलनको एउटा भिडिओबारे डिसेम्बर १९ मा ट्वीट गरे।
‘भारतको वर्तमान सरकारबाट हामी यो अपेक्षा कहिल्यै गर्न सक्दैनौँ कि उसले हाम्रो संविधान र आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्नेछ,’ उनले लेखे। ‘किनभने उसले आफ्नै कानुन र नागरिकको सम्मान गर्दैन। खासगरी अल्पसङ्ख्यकहरूको। हामी हाम्रो स्वतन्त्रता गुमाउन चाहन्नौँ।’
‘इन्डिया आउट’ अभियानले माल्दिभ्सबाट भारतका सैन्य अधिकारी तथा उपकरण हटाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। यो अभियानको शुरूवात सन् २०१८ मै भएको थियो।
त्यसबेला तत्कालीन राष्ट्रपति यामीनले भारतलाई उसका दुईवटा हेलिकप्टर र एउटा डार्नियर विमान फिर्ता लैजान भनेका थिए।
ती हेलिकप्टर र विमान माल्दिभ्समा खोजी तथा उद्धार कार्यमा प्रयोग भइरहेका थिए। त्यतिबेला माल्दिभ्सको तर्क थियो( भारतको तर्फबाट उपहारका रूपमा ती हेलिकप्टर र विमान आउका भए त्यसका पाइलट भारतका नभई माल्दिभ्सका हुनुपर्थ्यो। त्यो विषयलाई लिएर मानिसहरू सडकमै निस्के।
गत डिसेम्बर ५ मा आइल्यान्ड उड्डयन सेवा लिमिटेडका पूर्वनिर्देशक मोहम्म आमीनले ट्वीट गरेः ‘भारतसँग एउटा डार्नियर लिनु कुनै समस्या होइन, तर हामी डार्नियरसँगै भारतीय सैनिकको तैनाथीको विरोधमा छौँ।’
‘त्यसलाई उडाउन हामीसँग पर्याप्त अनुभव छ। ती हेलिकप्टरको दर्ता परिवर्तन गर्न पाउने विकल्प हुनुपर्छ। त्यसलाई फिर्ता गर्न पाउने अधिकार पनि हामीसँग हुनुपर्छ।’
भारतीय सैनिकहरू माल्दिभ्सबाट फर्कनुपर्ने प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ माल्दिभ्स पीपीएम र उसँग जोडिएका दलहरूको माग रहेको छ। माल्दिभ्सका पूर्वमन्त्री लुबना जाहिर ट्वीट गर्दै लेख्छन्स् ‘म भारतीय व्यञ्जन, उत्पादन र औषधि निकै मन पराउँछु, तर आफ्नो भूमिमा भारतीय सैनिकलाई हैन।’
अर्का पूर्वमन्त्री अहमद तौफिक लेख्छन्स् ‘माल्दिभ्सका जनताले भारतीय सैनिकप्रति आफ्नो आक्रोश पोखिरहेका छन्।’ सोही विषयमा गत सेप्टेम्बरमा माल्दिभ्सको सत्तारूढ दल माल्दिभ्स डेमोक्र्याटिक पार्टीको एउटा समूहले पनि मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको थियो।
सन् २०१८ मा माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिमा इब्राहिम सोलिह निर्वाचित भएयता देशको नीति भारतको पक्षमा रहिआएको बताइन्छ। सोलिहको नीति ‘इन्डिया फर्स्ट’ अर्थात्‌ ‘पहिला भारत’ रहिआए पनि भारतले ‘इन्डिया ओनली’ अर्थात्‌ ‘भारत मात्रै’ हुनुपर्नेमा दबाव दिँदै आएको छ।
सोलिहको शपथ समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी भएका थिए। उनको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच कैयौँ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
माल्दिभ्स किन महत्त्वपूर्ण छ ?
चीनका लागि माल्दिभ्स सामरिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्छ। माल्दिभ्समा चिनियाँ उपस्थितिलाई हिन्द महासागरमा उसको रणनीतिको एउटा हिस्साको रूपमा लिने गरिएको छ।
अर्कोतर्फ भारतका लागि पनि माल्दिभ्स कम महत्त्वपूर्ण छैन। भारतीय मुख्य भूभागदेखि माल्दिभ्स १,२०० किलोमिटर टाढा पर्छ। प्रतिकूल अवस्थामा माल्दिभ्सबाट भारतमाथि निगरानी गर्न चीनलाई सहज हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। बीबीसीबाट
पत्रकारिता कि प्रोपोगन्डा ?
तिनाउ दानव नदी करिडोर पीडितहरूको मागप्रति राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्वता
अफगानिस्तान घटनामा चीनको प्रतिक्रिया सकारात्मक